musha nyika dzakabatana Mabhirioni Larry Ellison Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inotaura Nhoroondo Yese yeAmerican Billionaire ine zita rezita "Shark". Our Larry Ellison Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwake. Zvimwe zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva iye mumwe weSimlicon Valley anoyemura zvikuru bhizinesi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Larry Ellison's biography iyo iri inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Larry Ellison Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kubva, Larry Ellison akaberekerwa muNew York City, USA paChNUMXth yaAugust 17. Akazvarwa kuna amai vake, Florence Spellman uye kuna baba vakashanda sePilot muuto reUnited States.
Nyika yeAmerica yemarudzi akasiyana-siyana nemutauro weItaly uye wechiJudha yaiva nemwedzi mipfumbamwe chete apo yaibata pneumonia. Izvi zvakakonzera amai vaLarry vasina kuroorwa kuti vatsvake zviri nani kumudzirira mukana. Nokudaro, akapa Larry kumbuya vake Linda nababamunini Louis kuti vagamuchirwe.
Mudiki Larry Ellison akarererwa nevabereki vokurera.
Larry akakurira kuChicago's South Shorewood naLinda naLouis. Kukura muguta racho Larry akabatana nehukama hwepedyo naamai vake vanogara. Kune rumwe rutivi, baba vake baba vaLouis vakanga vachitsvaga, vakaoma uye vakasindimara. Kunyange zvakadaro, Larry akararama pamusoro peRobert 'zvisina kunaka uye akakura achiratidza unhu hwekuzvimirira uye kuzvidzora.
Larry Ellison Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Dzidzo yeLarry inosanganisira zvidzidzo zvake paEugene Field Elementary School muChicago vasati vafambira kuSullivan High School. Paaiva pazvikoro zvakapinda Larry aiva mwana akachenjera aive nechinangwa mune zvakaoma zvakakwirira tech tech engineering.
Larry Ellison aifarira zvepamusoro tech mainjiniya zvidzidzo panguva yake yechikoro mazuva.
Kwapedza zvidzidzo zvekudzidza wakaona Larry anyoresa kuYunivhesiti yeItaly asi nekukurumidza akadonha kunze kwekunzwa mashoko ekufa kweamai vake. Achifambira mberi, akanyoresa paYunivhesiti yeChicago apo aipedza semeseri imwe chete achidzidza masvomhu uye physics asi munguva pfupi akatadza kufarira dzidzo uye akadzingwa.
Larry Ellison Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Larry akatamira kuBerkeley, California, kwaakagara pedyo nechepakati peArombo. Kunyange zvakadaro, munguva pfupi yakatanga kufarira mumakombiyuta uye purogiramu uye akazvidzidzisa kuva tech tech.
Pasina nguva mushure mekunge, akaisa Jobho wake wokutanga semuongorori paAmdhal corporation apo akaisa ruzivo rwake rwakagadziriswa zvakanaka kuburikidza nekushanda pane yekutanga IBM-compatible mainframe system.
Larry Ellison akatanga kushanda neAAmdhal mubatanidzwa muma1970.
Larry Ellison Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Mushure mekunge vane stint naAmdhal, Larry akatanga kushandira Ampex Corporation uko akabatsira kuvaka database yakanzi Oracle yeCIA. Apo Larry akanga aripo, akaverenga pepa rakanyorwa naEdgar F. Codd pane zvinyorwa zvemashoko ehurumende anonzi "A Relational Model of Data yeGuru Dhared Dash Data".
Akafuridzirwa nepepanhau Larry Co-akatanga nhepfenyuro yepa database pasi pezita rinonzi 'Software Development Laboratories (SDL)' mu1977. Vashandi vake vaiva Bob Miner naEd Oates avo vose vakashanda naye paAmpex Corporation.
Co-vavaki veOracle vachipemberera gore rekutanga rekambani yavo. Kubva kuna LR Ed Oates, Bob Miner (3rd kubva kuruboshwe) naLarry Ellison.
Larry Ellison Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Pakanga pasina magumo pakuona izvo Larry nemumwe wake vaigona kubudirira nekambani yavo itsva. Mukutanga kwe '80, kambani yakanzizve' Relational Software Inc 'uye yakaramba ichinzi' Oracle Systems Corporation '.
Kunyange zvazvo Oracle Systems Corporation yakatarisana nekunamatira pane imwe nguva munhoroondo yayo, kambani yakagadzira kudzoka kunotyisa kwakaona iyo ikava mutungamiri munharaunda-kutonga nzvimbo. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Parizvino maonero emuchadenga eOracle Corporation Musoro muRedwood Shores, California.
Larry Ellison Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Larry Ellison ave akaroorwa uye akarambana nguva dze4 tinokuudza zvinhu pamusoro penyaya yake yekuroorana, kukwata kwemhuri uye hukama hwehukama huripo. Kutanga, hazvizivikanwi nezvevakadzi vaakaroorana vasati varoora kumukadzi wake wokutanga Adda Quinn mu1967. Muchato waLarry neAdda wakatora makore 7 chete vasati varambana muC1974.
Larry Ellison mukadzi wekutanga Adda Quin.
Achienda paakaroorana naNancy Wheeler Jenkins mu1977, kubatana kwakagara kwegore rimwe chete vasati vaparadzana mu1978. Asingadi kukwira mune imwe imba, Larry akamirira kwemakore mashanu asati aroorwa nemudzimai wake anotevera Barbara Boothe mu1983.
Vaviri ava vaive nevana vaviri - David naMegan Ellison - vasati varambana muna 1986. David mugadziri wefirimu kuSkydance Media uku Megan akatsika nzira imwecheteyo semukoma wake kuzoita mugadziri wefirimu kuAnnapurna Mifananidzo.
Larry Ellison nemukadzi Barbara Boothe uye vana David & Megan Ellison mune mumwe mufananidzo.
Hupenyu hwokupedzisira hwehupenyu hwemhuri yaRarry hwakanga huri kuroorana naye mukurumbira wemanzwi, Melanie Craft mu2003. Vaviri vakagara vakaroora makore 7 vasati varambana mu2010. Larry ave achiita sarudzo dzake kuti arambe asina kuroora kwehupenyu hwake hwose uye ave achifambidzana nemuenzaniso Nikita Kahn kubvira pakupedzisira kurambana.
Larry Ellison nemusikana Nikita Kahn. Credits: Aceshowbiz.
Larry Ellison Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Larry ane zvinyorwa zvakaoma zvemhuri uye nhoroondo. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezve baba vaLarry Ellison: Larry baba vekubereka vanobva kuItari uye vakashanda saPilot muuto reUnited States. Akange asina kuroora amai vaLarry kana kuita hukama nehupenyu hwaLarry hwepakutanga. Ivo chete baba baba muhupenyu hwaLarry vaive babamunini vake vakashanduka baba vokurera, Louis Ellison.
Louis aiva muRussia akapinda muUnited States achishandisa Ellis Island. Somugumisiro, akazvitumidza zita rokuti Ellison mushure meChikoro ndokuenda kushanda semushandi wehurumende muChicago. Ellison akaita pfuma muimba yekutengesa asati aurasikirwa nehuwandu hwekuora mwoyo. Ane baba vakafukidzwa-baba neukama naRarry vanofunga kuti haana kutsigira, anogara achida uye anowanzo kure.
Baba vokurera vaLarry Louis Ellison. Credits: Bhizinesi Insider.
Nezve amai vaLarry Ellison (s) Larry's biological mom Florence Spellman akanga asina kuroora musikana wechiJudha wemakore gumi nemana panguva yekuberekwa kwa Larry. Nguva pfupi mushure mekupa Larry kukwidziridzwa iye akanyangarika kubva muupenyu hwake uye akangowana mukana wekusangana naye paaiva 19.
Imwe chete amai vanoonekwa mukurwara kwaLarry kwaiva amai vake, Lillian Spellman. Lilian akakurira Larry saiye aiva mwana wake. Somugumisiro, rufu rwake rwakazovhiringidza kukuru kuna Larry achiita kuti adzokere kuUniversity of Illinois.
Amai vaLarry vekurera Lillian Spellman nemurume wake Louis.
Pamusoro pe Larry Ellison vanaamai: Larry achiri kutaura pamusoro pehama nehanzvadzi dzake. Muchiedza chakafanana, haana kutaura chinhu pamusoro pekuru naambuya vake, vanun'una vake nemadzimai.
Larry Ellison Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Zvimwe Zvako
Chii chinoita kuti Larry akanganise? gara kumashure apo isu tinokuunzira maitiro ehunhu hwaLarry kuti akubatsire iwe kuwana izere mufananidzo wake. Kutanga, Larry's Persona isanganiswa yeESPN (kuwedzera, kuona, kufunga, kuona) hunhu. Anochinjika, anogara mupasi chairo uye ane simba rakawedzerwa rekuti zvinhu zviitwe.
Muchiedza chimwe chete, Larry anobvunza zvakajairika huchenjeri, anokahadzika nyanzvi uye mibvunzo masimba. Zvido zvake zvinosanganisira kuverenga, yacht mujaho uye kuteedzera nyanzvi tenesi makwikwi.
Larry mibvunzo yakajairika huchenjeri uye kusahadzika nyanzvi.
Larry Ellison Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Lifestyle
Neko inofungidzirwa yekodzero yeZNBX Billion USD, Larry anorarama hupenyu hwevana mabhiriyoni. Zviri pachena kuti iye anonyanya kufara uye anonyanya kutaura nezvemabhiriyoni uye anowirirana nehupenyu hwake nemhando dzakagadziriswa dzeItaly.
Chii chimwe? ane $ 110 mamirioni emadhora epfuma akanyorwa mushure mekuvakwa kwemaJapan uye ane dzimba dzakapararira pasirese. Larry anotovawo ne 98% yeLanai, chitsuwa chechitanhatu pakukura muHawaii.
Larry Ellison ane 98% yeLanai Island.
Larry asingatenderi ane motokari dzinotyisa, kusanganisira McLaren F1, an Audi R8, Lexus LFA uye Lexus LS (XF40). Kuva mutyairi wenyoreji anoratidza simba remabhiriyoni nekubhururuka mukati maro majetsti ehondo yega uye anonzi MiG-29.
Larry Ellison ane zvekunze mota uye hi-tech yakavanzika majeti.
Larry Ellison Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Untold Facts
Larry akakurira Reform yechiJudha asi anoramba ari muchitendero chekutya. Akatoramba kuva ne "bar mitzvah" kupemberera paakanga ava nemakore gumi nematatu. Kunyange zvakadaro, anongova nechitendero asi haatendi kune dzidziso.
Larry akaita sarudzo yakauya mu Iron Man 2 (2010). Anononoka kwenguva pfupi paStark Expo, apo Stark anoti, 'Ndiyo Oracle yaOracle.'
Larry mufambisi wengarava anodakarira uyo ane yachts anokosha mazana emamirioni emadhora. Iye ari kushingairira kumhanya mumakwikwi eacht uye muna 2013 akatungamira yake Oracle Team USA kuhwina mukombe weAmerica.
Larry Ellison anofarira kufamba nechikepe uye ave achibatanidzwa mumakwikwi mazhinji emakwikwi.
Akanga ari mu 1997 akaita mutungamiriri weApple Computers. Iye, zvakadaro, akazvitsaurira munaSeptember 2002 achitsanangura kushaya kwehutano nguva yepamisangano yebhodi.
Ndiye mumwe wevanhu vane mabhiriyoni akange asarudza kuita chikamu chemazana ehupfumi hwavo kune zvipo zvinokonzera nekusayina The Giving Pledge. mamwe mamioneyoni akasaina pledge anosanganisira Elon musk, Mark Zuckerberg uye Bill Gates.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Larry Ellison Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!